Sambava - Vadina polisy telo natao takalon'aina - Blog de madanews
Sambava - Vadina polisy telo natao takalon'aina
Tafapaka any amin'ny faritra manerana ny Nosy ny fandrobana ataon'ny mpanararaotra. Tena ratsy ny fisehoan'izany tany Sambava satria niharan'ny fandrahonana sy vono ary fandrobana ny mpila ravinahitra any an-toerana.
Vokany, olona telo no maty ary vadina polisy telo natao takalon'aina.Nivadika ho ady an-trano ny tolona misy ao an-tampon-tanànan'i Sambava ao omaly. Araka ny vaovao tany an-toerana, dia vadina polisy telo no nataon'ny andian-jiolahy mpandroba takalon'aina. « Tamin'ny sivy ora maraina no nanomboka ny filaharana teo amin'ny Parcage taloha. Nikorontana saika handrava tranombarotra ireo andian'olona ireo, ka voatery nanao tifitra fampitandremana ny polisy. Olona no niantefan'ny taimbala ka niafara tamin'ny fahafatesany izany. Tezitra mafy tamin'izany ny ankilany ka vadina polisy telo no nalain'izy ireo an-keriny tao an-tranony », hoy ny fanazavan'ny mponina iray any an-toerana. Teo no nanomboka tsy nilamina ny vahoaka. Nasesin'ireo andian'olona norobaina ny tranon'ireo polisy ireo. Voalaza tamin'izany fa nitsoaka any ambanivohitra niaraka tamin'ny vady aman-janany ireto mpitandro filaminana ireto. Hatramin'ny fotoana nanoratanay dia mbola tsy hita popoka ny toerana misy ireo takalon'aina ireo. Raha ny fanampim-panazavana azo ihany dia ny polisy irery ihany no mpitandro filaminana niasa tamin'io fotoana io. Ny antoandro vao niditra an-tsehatra ny zandary sy ny miaramila ka nilamindamina kely ny tanàna. Ny talata teo no efa may ny tranombarotra « Tiko » tany an-toerana.
Nivadika ho fankahalana
Araka ny vaovao azo avy any an-toerana ihany, dia tena ratsy ny fizotry ny raharaha politika. Ny alin'ny talata teo dia nasesin'olon-tsy fantatra dorana ihany koa ny tranon'ny olona avy aty afovoan-tany. Mpivady iray no nokapain'ny mpandroba tamin'ny famaky rehefa avy nodorany ny tsenakeliny. Mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly any an-toerana izy ireo ary tena ratsy ny fahasalamany. Miely koa ny fandrahonana maro isan-karazany atao amin'ireto Malagasy mitovy aminy ireto. Mivadika ho fankahalana sy fikendrena olon-tsotra ny ataon'ireo andian'olona mpandrava ireo. Nanomboka ny talata teo no efa nitrangan'izany tany an-toerana. Araka ny fantatra dia torak'izany koa ny zava-nitranga tany Antalaha izay namoizana ain'olona fito. Nahery vaika ity fitokonana 2009 ity, fa tao anatin'ny telo andro dia efa manodidina ny 70 eo ho eo ireo maty namoy ny ainy.
# Posté le jeudi 29 janvier 2009 00:09